Kuuriyada Waqooyi oo ka digtay dagaal - BBC Somali - Warar
Kuuriyada Waqooyi oo ka digtay dagaal
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 Maarso, 2013, 11:44 GMT 14:44 SGA
Hogaamiyaha Kuuriyada Kim Jong-Un oo kulan la qaadanaya saraakiisha sare ee ciidamadiisa.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay xaalad dagaal la galayso Kuuriyada Koonfureed.
Waxay ka hadashay daandaansiga Maraykanka iyo inay keeni karto dagaal nukliyeer la isticmaalo.
Kuuriyada Koonfureed ayaa ku hanjabtay inay xirayso saldhigyo ay la leedahay Kuuriyada Koonfureed.
Xiisada u dhaxaysa labada Kuuriya, ayaa sii kordhaysay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay nukliyeer iyo tijaabooyin milatari oo ka socda labada dhinac iyadoo Maraykanka uu ka qaybqaadanayo dhinaca Kuuriyada Koonfureed.
Shiinaha iyo Ruushka ayaa ugu baaqay labada dhinac inay iska ilaaliyaan dagaal qatar ah.
Aasiya Dibedbaxayaal loo oggolaaday xarunta dowladda Tailand
Tacsida Nelson Mandela
Madoobe oo magacaabay guddi fulin
Suldaan ku gacanseyray magacaabista